N'ogbe obula 3D iko dị mkpa Mmanụ Efu | AromaEasy
Home / shop / Esi ísì ụtọ / Igwe diffuser
Esi ísì ụtọ (78)
Metal diffuser (7)
Osisi diffuser (17)
AromaEasy na-ahụ maka imepụta mmanụ dị oke mma dị oke mma site na iji nka mara mma. Site na imebe ihe dị mfe ma dị nro, igwefoto 3D a na-esi ísì ụtọ ga-adabara ụlọ ndozi gị.
Ngwakọta mmanụ a dị mkpa 3D na-agbaji mmiri n'ime ụmụ irighiri ihe nke na-enye ohere Mkpa mmanụ ka itinye aka na mmiri ma mee ka ikuku banye, na-eme ka uru dị mma sitere na mmachi ọgwụgwọ.
ibu Họrọ otu nhọrọ1 Ibe (Sample) - $ 24.9924 PC - $ 356.16 ($ 14.84 / PC)240 PC - $ 3490.37 ($ 14.54 / PC)Ọtụtụ ndị ọzọ, biko kpọtụrụ anyị Clear
N'ogbe 3, 117D Mkpokọta Mmanụ Mkpo Siri Esemokwu Diffuser XXNUMXE
SKU: X117E Categories: All Products, Esi ísì ụtọ, Igwe diffuser
N'ogbe 3, XNUMXD Mkpokọta Mpempe mmanụ Mpempe mmanụ
ihe: ABS + PP + 3D Iko
ike: 5W / 3.0MHz 9W / 1.7MHz
voltaji: DC 5V DC 24V
Ike nke mmiri: 100ml
Mmepụta Echiche: 15-20ml / hr
Mpaghara mkpuchi: 30㎡
Ọnọdụ Ìhè: 7 agba agba na idozi na otu agba
Ọnọdụ mpụ: ahihia na-aga n'ihu / nke na-adịghị anya
nghazi oge: 1h, 2h
Ogologo ubochi: 1.0 m-1.5m ogologo
Akwụkwọ ikike: 1 afọ
Size Product: 132 * 132 * 155mm Ibu ibu: 433g
Mbukota Size kwa otu: 170 * 170 * 190mm Mbukota ibu kwa nkeji: 693g
Ogo okike / nkeji: 695 * 525 * 210mm / 12pcs Arọ Carton: 8.316Kg
20GP akpa / nkeji 3888pcs (324ctns)
40HQ akpa / nkeji 10128pcs (844ctns)
User Manual USB USB
Ọ dị mfe iji ma dị ọcha.
Stylish 3D night light saamayn: Na a rụrụ nke ọma, a iko mkpa mmanụ diffuser na-agụnye 7-agba ịgbanwe ọkụ LED. Mgbe ị gbanwere onye na-agbanwe ihe n’abalị, ọkụ ga-abụ mgbakwunye dị mma maka ihe ndozi ụlọ gị site na ngosipụta ngosi 3D dị egwu. Agba ọkụ na-agbanwe agbanwe na agba odo na-adọrọ mmasị, ọkachasị n’ime ụlọ gbara ọchịchịrị. Nke a diffuser nwekwara ike ịgba ọsọ n’enweghị ọkụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ. You nwekwara ike ịhọrọ ma dozie otu ụcha maka ọkụ ndị na-enye mmanụ n’ọkụ.
Ọrụ Nwepu Onwe Smart Ọrụ a na-echekwa nchekwa gị, yana ọrụ ogologo oge maka onwe ya kama imebi ngwa ngwa.
Nnukwu nhụsianya: Mkpa mmanụ dị mkpa na-arụ ọrụ na usoro ultrasonic, yabụ ọ dị oke jụụ. Gaghị echegbu onwe gị n’ebe ọrụ ma ọ bụ mgbe ị na-ehi ụra.
Ọrụ ngụ oge: Onye ọrụ mmanụ a nwere oge ị ga-eji setịpụ oge dị iche iche (ọtụtụ nhọrọ maka ịtọ ntọala - elekere 1, elekere 2, ma ọ bụ nọrọ).
Ngwa mkpa dị iche iche eji eme mmanụ
Jiri njem a na-eme ka aromatherapy jiri ụdị ihe nchekwa 3D dị mkpa dị mkpa iji kwalite ahụike gị.
Wepu ísìsì ụtọ gị wee jupụta oghere ísì dị gị ụtọ na isi anwụrụ.
Were mmiri na mmanụ dị urara anụ ahụ gị mma.
Obere mkpagharị maka ,lọ, Yoga Studio, Office, Spa Room, Bed ime, Room Baby. Echiche onyinye zuru oke maka ezinụlọ na ndị enyi hụrụ ntụ n'anya n'anya ma ọ bụ nwee ike irite uru na ọgwụgwọ aromatherapy.
Ihe eji eme ngwugwu
Bọchị iri abụọ ka ịnata ụgwọ nkwalite 20% na T / T
Oge nlele: ụbọchị 3-5
Asambodo / Ogo Ngwa
Sample ngwaahịa: 1-2 ụbọchị
Nleba nke OEM: ihe dika ubochi asaa
Mmepụta Mass: 15-20 ụbọchị ọrụ nke na-adabere na ọnụọgụ
Ebu: plastiki ụbọchị 30, metal ụbọchị iri atọ
Ndị ọrụ R & D ọkachamara (ụdị ọhụrụ 3-5 kwa ọnwa)
10 mma injinia & 5 emepụta
100+ ndị ọrụ nwere ahụike na ndị nwere ọgụgụ isi
500,000 nkeji kwa ọnwa mmepụta
Mankeumman, ETL, TUV, ISO, KC, IC, SAA, C-Akọrọ, RoHS, FCC, OA & GS asambodo
A nwalere ngwaahịa ọ bụla na usoro 10+
Nlele 100% nká site na ndi otu QC tupu ichikota.
Ngwaahịa niile na-agbaso ụkpụrụ mba ụwa ISO9001.
N'ime afọ 8 nke ahụmịhe OEM / ODM.
Nye anyi echiche gi, anyi g’esi mee ka atumatu gi bata n’ime ndu ya.
Ndị ọzọ Products
Brandị Ndị Na-atụkwasị Obi Aromaeasy
kasị mma n'ire